बुद्धिजीवी, आगो र फूल- विचार - कान्तिपुर समाचार
बुद्धिजीवी, आगो र फूल
जेष्ठ २९, २०७४ अभि सुवेदी
केही समयदेखि मलाई आन्दोलित गरिबसेको एउटा प्रश्न छ– हामी कहाँ सिर्जनशील छौं र कहाँ सिर्जनशीलताको सम्वेदना गुमाउँदैछौं ? अहिले पढ्ने र सुन्ने दुवै कुराको बाढी आएको छ । यस्तो बेला कुन सिर्जनशील चिन्ता हो र कुनचाहिँ होइन भनी खुट्याउन अप्ठ्यारो छ ।
केही समयदेखि मलाई आन्दोलित गरिबसेको एउटा प्रश्न छ– हामी कहाँ सिर्जनशील छौं र कहाँ सिर्जनशीलताको सम्वेदना गुमाउँदैछौं ? अहिले पढ्ने र सुन्ने दुवै कुराको बाढी आएको छ । यस्तो बेला कुन सिर्जनशील चिन्ता हो र कुनचाहिँ होइन भनी खुट्याउनअप्ठ्यारो छ । हामी साहित्यका अनुयायी र साधक हौं भनी बस्नेका निम्ति यो विषय चाखलाग्दो छ । धेरै अखबारका आलेखहरूले समाउने यो बेलाको चिन्तालाई साहित्यिक भनिएको छ । ईश्वरवल्लभ दाइका कविताको शीर्षक दोहोर्‍याउन मन लाग्छ । हामी आगोका फूलहरू लेखिरहेका छौं, हामी आगोका फूलहरू लेखिरहेका छैनौं ।
जापानी कविताको परम्परामा एउटा हाइकु भन्ने छोटो कविताको रूप हुन्छ । मैले यसको जेन दर्शन र पेन्टिङसँग सम्बन्ध छ भन्ने कुरा पछि अध्ययन गर्दै जाँदा बुझेँ । मूल कुरा आविष्कार रहेछ । ध्यानका क्षणहरू हुन्छन्, जुन कविलाई मात्र होइन, राजनीति गर्नेलाई पनि चाहिन्छ । साहित्यिक दृष्टिमा भन्दा म एडवार्ड सइदको साहित्यिक मानवतावाद मनपराउने व्यक्ति हुँ । समालोचना यसो यदाकदा मात्र लेख्छु, अब त्यसको काम छैन । विचार र सिद्धान्तहरूको छ । नेपालीमा कहिल्यै नलेखेका तर अहिले जोडदार नेपालीमा लेख्न थालेका मेरा पहिलेका विद्यार्थी र अहिले विद्वान प्राध्यापक अरुण गुप्तोका साहित्य समीक्षा पढ्छु । तिनको साहित्यिक मानवतावाद मनपर्छ । मेरो यो निबन्धात्मक लेखमा अनुभव पनि बोल्छन् ।
मसँग केही समयदेखि युवा पुस्ताका मिडियाकर्मी र विद्यार्थीहरूले बारम्बार छलफल गर्न खोजेको विषय हो, नेपालमा आम बुद्धिजीवी भनेको को हो ? तर उनीहरू अङ्ग्रेजी शव्द ‘पब्लिक इन्टलेक्चुअल’ प्रयोग गर्छन् । मलाई लाग्छ, उनीहरू केही सिर्जनशील चिन्ताको खोजीमा छन् । मसँग ‘सेतो पाटी’ अनलाइनका एक युवक पत्रकारले केही समयअघि कमलप्रकाश मल्लबारे जान्न खोजे । मैले त युवाहरूले नै खोजुन्, हामी त गुरुहरूका कुरा के भनिरहनु भनेर अलग हुनखोजेंँ । तर उनले निकै जोड गरेपछि मैले मेरा गुरु कमलप्रकाश मल्लबारे आफ्ना विचारहरू राखँें । उनले सरल शैलीमा राम्ररी लेखे, त्यो विषय । मूलकारण रहेछ, मल्ल सरले नेपाली बुद्धिजीवी वा ‘इन्टेलिजेन्सिया’माथि लेखेका लेखको स्मृतिको प्रसङ्ग । अनलाइन र छापाहरूमा अरु पनि एकाध लेखहरू अन्तर्वार्ताको रूपमा प्रकाशित देखेंँ । मलाई अहिलेका युवाहरूमा ‘पब्लिक इन्टलेक्चुअल’हरूबारे जान्ने इच्छा किन भएको छ ? जान्न मनलागेको छ । यो विषयमा छलफल हुनु अथवा को ‘पब्लिक इन्टलेक्चुअल’ अथवा आम बुद्धिजीवी हो अथवा ‘इन्टेलिजेन्सिया’ हो भन्ने कुरामाथि छलफल हुनु राम्रो विषय हो । यी प्रसङ्गहरू, पूर्वअनुभव र सम्झना अनि अहिलेका आफ्ना विचार राखेर लेख्नुपर्ने लामै लेखको विषय भएको हुनाले यो सानो लेखमा सबै समेट्न सम्भव भएन । आम बुद्धिजीवीले कहाँ–कहाँ व्यापकता पाउँछ, कस्ता ठाउँमा सक्रिय हुन्छ र उसका बुद्धिजीवी हुने आधार के हुन् भन्ने कुरामा छलफल हुने गरेका छन् । त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
लाग्छ, केही समयदेखि नेपालमा पहिले नसोधिएका प्रश्नहरू सोध्ने चलन थालिएको छ । पहिले सोच्तै नसोचेका कुरा हाम्रो जीवनमा घटित हुनलागेका छन् । तर विश्वभरि नै यस्तै अवस्था आइपरेका छन् भने हामीलाई त मन नपर्ने कुरै भएन । पश्चिमी लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको आधार चुनाव हो, ती त्यही पद्धतिभित्रै गाँठोमा अल्झिन थालेका कैयौं उदाहरण देखिन थालेका छन् । अरु कुरा सिद्धान्तहरू हुन्, जसलाई आधार राखेर राजनीति र समाजका नाइके र नागरिक समाजका मान्छेले समाज बदल्ने दृष्टि बनाउँछन् । सजिलो हुँदैन भन्ने देखिएको छ । युवा पुस्ताका मानिसले बारम्बार सोधिरहने प्रश्नका उत्तर गर्दागर्दै आजकाल मलाई आफूले भोगिआएको समयमाथि चाख लाग्न थालेको छ । तर एउटा कुरा अनुत्तरित छ । अहिलेको आम बुद्धिजीवीको विषयमा खोजी गर्नुपर्नेमा किन यसको स्मृति, पहिलेका मानिसले के भने भन्ने कुरामा युवाका चाख बढेका छन् ? यसको उत्तर खोज्ने क्रममा सम्झिन्छु, पहिले पञ्चायत कालका अन्तिम वर्षहरूमा बुद्धिजीवीका विषय उठेका थिए । मलाई आजकाल गरिने प्रश्नहरू हुन्, नेपालमा बुद्धिजीवीको विषयमा बहस गर्नुपर्दा तपाईं ककसका नाम लिनुहुन्छ ? नेपालमा आम बुद्धिजीवीहरूको दायित्व के हो ? नेपालमा राजनीति गर्नेहरू कस्ता किसिमका बुद्धिजीवी हुन् भन्ने मान्नुहुन्छ ? तपाईंका अमूक गुरु वा अमूक ‘कलिग’ले बुद्धिजीवीमाथि लेख्नु वा बोल्नुभएको रहेछ, तपाईं उहाँलाई कस्तो मान्नुहुन्छ ? सबै स्मृति अध्ययन हुन् ।
अहिलेको नेपाली समाजमा अमूक मानिस बुद्धिजीवी थिए कि थिएनन् भनी प्रश्न गर्ने युवाहरूमा कतिपय मेरै विद्यार्थी पनि पर्छन् । यो बुद्धिजीवी भन्ने विषयमाथि नै भने पञ्चायत कालको उत्तरखण्डमा निकै चलेको थियो । त्यो बेला बौद्धिक वा शिक्षक वर्गमा अध्ययन गर्ने र व्यवस्थालाई खासै असर नपर्नेगरी ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गर्नेगरी बहस गरिएका पाठहरू मेरो सङ्कलनमा सकुशल छन् । कुनै बेला सन्दर्भ सहितको लेख लेख्नुपरेको बेला यी सबै लेख र छलफलका प्रसङ्ग निकालिनेछन् । तर अहिले बुद्धिजीवीको विषयका छलफल हुँदा हिजोकै बुद्धिजीवीका अप्ठ्याराका कुरा आइबस्नु मलाई अनौठो लाग्छ । नेपालका बुद्धिजीवीले दलीय र लोकतान्त्रिक कालमा अनेकौं संगठनात्मक रचना गरेका छन् । जनआन्दोलनपछि त्रिवि कीर्तिपुरमा एकजना मित्रले एउटा बुद्धिजीवीहरूले निकालेको वक्तव्यमा सही गर्न ‘तपाईंको बाँकी रहेछ’ भनेर ल्याए । पुछारतिर थुप्रै केरिएर ‘पालिम्पसेस्ट’ जस्तोगरी सही गरिएका थिए ।
सेतो ‘फ्लुइड’ले मेटेको सतहमाथि मैले चिप्लिएको सही गरेँ । पछि वक्तव्य जारी भयो, तर मेरो नाम थिएन । त्यसै उत्सुकताले ती मित्रलाई सोधेँ । उनी अलिक अनकनाए, तर भने, साथीहरूले तपाईं हाम्रो समूहमा पर्नुहुन्न भनेकाले राखेनौं । ढाँट्नु हुँदैन, भित्र अत्यन्त खुसी भएँ । अहिले ती मित्र एउटा प्राज्ञ छन् । ती मैले मानेका मान्छेमा पर्छन् । यसरी बुद्धिजीवीहरूका समूह बने । विवेकले होइन, ह्विपले भने अनुसार ती बोल्छन् र त्यही अनुसार ती मानिसलाई हेर्छन् । सर्वोच्च अदालतकी निष्ठावान न्यायमूर्तिको पक्षमा नबोल्न होस् कि अरु लोकतान्त्रिक र नागरिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरामा होस्, त्यही ह्विपले निर्णय गरेअनुसार हुन्छ । तर यस्तो हुनु भनेको कारुणिक अवस्था हो, बुद्धिजीवीको ।
साधारण अर्थमा बुझ्दा, बुद्धिजीवी सहज किसिमले आफ्ना विचार राख्ने मनुवा हो भने ऊ खतराका सीमा वारपार गर्ने एउटा व्यक्ति पनि हो । ऊ भावनाको होइन, बुद्धिको सहारा लिन्छ । ऊ आफूले पढेको र सोचेको अनि आफूले निर्णय गरेको विश्वास लिएर आमवृत्तलाई हेर्छ । सीमा र आमवृत्तलाई भोगेका, राज्य र त्यसका शासकका अनुदार चरित्र भोगेका र बुझेका एडवर्ड सइदले बुद्धिजीवीमाथि लेखेको ‘रिप्रिजेन्टेसन अफ दि इन्टेलेक्चुअल’ (१९९४) भन्ने सानो किताब मलाई मनपर्ने मध्येको एउटा उदाहरण हो । नेपालमा बुद्धिजीवीको भूमिकाबारे दलगत विचार लिएका भए पनि केही राजनेताहले प्रेरणाप्रद कुरा लेखेर छोडेका छन् । जनताका अधिकारबारे प्रस्ट बोल्नु, देशको माया गर्दा निकै पीडित हुनु, समाज र देश अनि जनताका माया र चिन्तामा पिरोलिनु अनि मलाई यो जन्मेको माटोले भनेको छ, राजनीतिमा सहभागी हुन्छु भन्नु एउटा बुद्धिजीवीको राजनीतिक ‘ओडीसी’ हो । राजनीतिक विषयलाई लिएर सहज जीवन हुनेको भन्दा तीव्र अनुभवले भोगेको, इमानदार राजनीतिक बुद्धिजीवीको चरित्र हो, त्यो । मैले केही मधेसी राजनीतिज्ञमा बुद्धिजीवीको त्यो चरित्र देखेको छु । अरु पनि छन् । आमवृत्तभित्र कुनै चुनौतीविना काम गर्नुले अनि बुद्धिका कुरा छाँट्नुले मात्र राजनीतिक चेतनालाई भावनाको काव्यिक चुनौतीमा रूपान्तरित गरेर बोल्ने सही बुद्धिजीवी बनाउँदैन ।
मलाई मिडियामा साहित्यिक प्राज्ञिक मानिसको उपस्थिति गराउने चाहना भएका एकजना युवक पत्रकारले सोधे, ‘हिजोआज के लेख्दै हुनुहुन्छ ?’ प्रश्न साधारण हो, तर म झसङ्ग भएँ । उनले मलाई सोधेको कारण थियो, साहित्यकार कस्तो बुद्धिजीवी हो र उसले के लेख्छ ? मैले भने, ‘लेख्न छोडेका विषयहरूमा लेख्दैछु । एकेडेमीमा केही हार्न नसकिने व्यक्ति छन्, अमर गिरी, ज्ञानु पाण्डे र उषा ठाकुर । गिरीलाई जनजाति कवितामाथि सोह्र हजार शब्दको समालोचना लेखेर दिएँ । ज्ञानु पाण्डेको निम्ति जाक डेरिडा लेख्दैछु । उषा ठाकुरले अनुवाद विषय हेर्छिन् । म लेख्छु, तर ढुक्क भए हुन्छ, ती छापिँदैनन् । एउटा यस्तै हामीले तयार गरेको सङ्कलन विगतमा एकेडेमीले ननिकालेकोले पाँच वर्ष लगाएर हामीले निकाल्न लगाएका थियौं ।’
प्रकाशनको फुटकर युग हो, अहिलेको । वर्तमान चाहिँ स्पन्दन हो, अनि हिजो को को बुद्धिजीवी थिए, हँ ? भनेर खोजिहिँड्नु स्मृतिमात्र हो । अब समालोचना त के, यहाँ राजनीतिका पनि कल्पनामा धनी, सिर्जनशील आलेख र किताब सितिमिती लेखिइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । सबैथरी मानिस व्यवहारवादी, ‘प्राग्म्याटिक’ अनि भ्रममुक्त वा ‘डिसइल्युजन’ भएको युग आएको छ, नेपालमा । त्यस्तो बेलामा कि निकै गतिला कुराका छलफल हुन्छन्, लेख लेखिन्छन्, कि केही पनि गरिँदैनन् । अहिले हामी आगोका फूल हुन्, आगोका फूल होइनन् भन्ने अवस्थामा छौं । न आगोका फूल हुन्छन्, न फूलमा आगो हुन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:५९
रोगी बने सडक व्यापारी
काठमाडौं — थापाथलीकी सीता लामा सडककिनारमा मकै पोलेर बेच्छिन् । १५ वर्ष भयो उनले मकै बेचेर परिवार पालेको । ‘मकै बेचेरै घर चलाउने हो, श्रीमान् छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘यसैबाट हो घरखर्च चलाउने ।’ सडक व्यापार गर्न थालेको केही वर्ष उनको स्वास्थ्य राम्रै थियो । आजभोलि उनलाई विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले सताउन थालेको छ ।
‘दिनभर घाममा बसेर होला, छाला कालो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘बेस्सरी चिलाउँछ, दिनदिनै नुहाउनुपर्छ ।’ छालारोग विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडाका अनुसार लामो अवधिसम्म सडकमा समय बिताउनेलाई गम्भीर खाले छाला रोग लाग्छन् । ‘घाम र धुवाँधूलोले अधिकांशलाई दाद, डन्डिफोर र चायाँपोतोको समस्या हुन्छ,’ उनले भने । लामो समय सडककिनार बस्ने व्यापारीलाई छालाको क्यान्सर हुनसक्ने खतिवडा बताउँछन् । ओखलढुंगाका मनिराम ढकाल पनि सडक व्यापारी हुन् । १८ वर्ष भयो उनले रत्नपार्कको सडकमा चिया बेच्न थालेको । ५७ वर्षीय ढकाललाई पनि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले गाँजेको छ । वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. ढुण्डीराज पौडेलका अनुसार अधिकांश सडक व्यापारीलाई घाँटीसम्बन्धी रोग लाग्छ । ‘सडकमा बस्ने हुँदा उनीहरूलाई सरुवा रोगको उत्तिकै जोखिम हुन्छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७४ ०८:३८